Estradiol Valerate powder (979-32-8) & Mugadziri fekitori
/ Products / Madzimai eHormoni / Estradiol Valerate upfu
Rating: SKU: 979-32-8. Category: Madzimai eHormoni
Nzira yakagadziriswa inobatanidza uye inogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweEstradiol Valerate powder (979-32-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Estradiol valerate powder is female isrogen hormone. Inoshanda kuburikidza nechinzvimbo chemaestrogenji yemuviri mumukadzi asingakwanisi kubereka zvakakwana esrogen.Ichishandira kenza yepamusoro yeprostate nekurwisa mahomoni evanhu.
Estradiol Valerate powder video
Raw Estradiol Kugadzirisa powder basic Characters
Molecular Kurema: 356.4984
Raw Estradiol Kugadzira kushandiswa kwehupfu muSteroids
Zita reGeneric: estradiol valerate, ess-tra-DIE-ole (CAS 979-32-8)
Zita Rekushandisa: Delestrogen
Raw Estradiol Valerate powder Usage
Shandisa estradiol valerate sezvinorayirwa nachiremba wako. Tarisa tsamba iyo mishonga yemashoko chaiwo ekuraira. Tarisa tsamba iyo mishonga yemashoko chaiwo ekuraira.
Warning on Raw Estradiol Valerate powder
Mimwe mishonga inogona kuwirirana ne-estradiol valerate. Bvunza mutano wako wehutano kana isradiol valerate (CAS 979-32-8) inogona kuwirirana nemimwe mishonga yaunotora. Checkwith mutevedzeri wako wehutano usati watanga, rega, kana kuti uchinje mazamu emishonga chero ipi zvayo.
Estradiol valerate inowanzochengetwa uye inochengetwa nehutano hwehutano. Kana iwe uri kushandisa isradiol valerate kumba, dare estradiol valerate sezvinorayirwa nemufarisi wako kana mutano wehutano. Chengetera estradiol valerate kunze kwekusvika kwevana uye kure nemhuka dzemhuka.Estradiol valerate inowanzochengetwa uye inorongedzerwa nemutano wehutano. Kana iwe uri kushandisa isradiol valerate kumba, dare estradiol valerate sezvinorayirwa nemufarisi wako kana mutano wehutano. Chengetera isradiol valerate kunze kwekusvika kwevana uye kure nemhuka dzemhuka.
Raw Estradiol Kuzadza Poda Kudengesa
Nzira yekutenga Estradiol Valerate powder (CAS 979-32-8) kubva kuAASraw